Ikhowudi ye-CITRA: 011003-LT-0011 - I-Apartment yokusetyenziswa kwabakhenkethi kunye nomnyango ozimeleyo kumanqanaba ama-3, ihlaziywe ngokucokisekileyo kutshanje ngengqwalasela enkulu kwiinkcukacha. Imigangatho kwiindawo ezininzi zenziwe ngamaplanga kwaye kunye nemiqadi eveziweyo yamandulo inika ukufudumala kunye nokusondelana.
Indlu ali-1 lokulala kabini kunye kwenye kophahla, 1 iwele lokulala (zijikwe zibe kabini ngesicelo), igumbi abaphila ne esililini isofa kabini, 2 zokuhlambela kunye ishawa, ikhitshi kunye okudlela indawo abantu 6 epheleleyo kunye izitya, kumatshini wokuhlamba kunye njengesicocisi. Amagumbi okulala ama-2 kunye negumbi lokuhlala lixhotyiswe ngeTV, sonke isakhiwo sixhotyiswe nge-Intanethi nge-Wi-Fi enikezelwe kwiindwendwe.
Yeyona ndawo ifanelekileyo yokuphumla emva kweentsuku ezishushu elwandle, emva kokubuya kuhambo kwindawo ejikelezileyo, kwiindledlana ezininzi zehlathi kunye nokujongana nolwandle, okanye emva kokuhamba ixesha elide ngebhayisekile yendlela okanye i-MTB.
ILa Torretta ibekwe eBeverino, idolophu encinci eVal di Vara eluhlaza, kwiPhondo laseLa Spezia, indawo ebalaseleyo yokutyelela iilali ezibukekayo kunye neempawu zePaki yeSizwe yaseCinque Terre, iGulf of Poets kunye nobumnandi bayo, iimyuziyam kunye lwezinto la Spezia, -ngenxa engaguquki Porto Venere kunye nondiliseko Lerici, Versilia kunye nePersian of Tigullio. Izixeko eziyimbali zeGenoa, iPisa, iFlorence kunye nezikhululo zeenqwelomoya zabo nazo zijikeleze iyure enye ngemoto.